Ropotamo saladhi Art sens - mazano eimba nebindu
18.09.2014 Yakatumirwa na: Art Sense
Nguva yechando, Pfungwa Pamba, Recipes
Recipe yemunhu wese anofarira chando - Ropotamo saladi.
Zvinodiwa zvigadzirwa zvedhidhi imwe chete (nezve 8 yakajairwa hari hombe):
1 kg nyemba
1 hari yakakura yemakotoni makoti
1 mbiya hombe yemakangwa akagochwa pepper
1 hari yakakura ye canned tomato puree
1 kg makaroti
1 hombe yakakura yemaputi akaomeswa (sarudzo)
1-2 parsley zvinongedzo Marina
Mafuta - 180 c
Vhiniga - 180 c
Shuwa - 50 c
Ongorora: Muchiitiko ichi, iyi miriwo yakagadzirwa-pamba uye mbatata dzakabikwa dzakagadzirirwa maererano nezvaunoda. Kana iwe ukafunga kushandisa matangi akatengwa, isu hatipe vimbiso yekuravira uye kunaka kwemhedzisiro yemhedzisiro.
Isu tinobika nyemba uye karoti zvakasiyana. Cheka karoti mu cubes, tsanga yakakangwa uye makapuni, parsley yakatemwa yakatemwa.
Pisa mafuta, vhiniga, munyu uye shuga kune bota uye ramba uchiisa pane chitofu kusvikira munyu neshuga zvanyungudika. Bvisa kubva kuchitofu kuti utonhore.
Isu tinogadzirira mudziyo une saizi yakakora uye sanganisa makaroti akabikwa, akachekwa matangi uye pepper, parsley uye mudira bhinzi yakabikwa mukati mavo. Pakupedzisira tinowedzera chirongo cheti nyanya. Svina uye udururire mune yakavezwa marinade. Zvekare, tinosimudzira zvinyoro-nyoro. Rega ikamire usiku husiku ichitonhora kusanganisa magaka ezvigadzirwa zvakanaka. Zuva rinotevera, mangwanani, tinozadza mbiya uye siga. Izvi ndizvo!
kumba chando, kumba kugunun'una, chikafu chakabikwa, chando, chikafu chakabikwa, chando chando, bika ne bhinzi, mapikicha, nguva yechando yekubika, tinogunun'una, lettuce, Ropotamo saladhi, mazano epamba, zvemukati dhizaini, fenicha, zvemukati mazano, dhizaini mazano, imba yemazuva ano, kurongedza mazano, hunyanzvi mazano
Sezvatacherechedzwa, mbatatisi dzinogona kusanganiswa pamwe nehuwandu hwezvakasiyana ...
Knit apuro pie nesinamoni
Sezvakambo rondedzerwa, pasita imhando yeapotheosis yeunyanzvi hwechiitiko ...
Chocolate cubes nemakwenzi
Ipfungwa huru uye nyowani yekunakidza sitrawiti yakanyudzwa yakanyikwa mune chokoreti. Musanganiswa uyu ...
Ichi chiitiko chinonaka kwazvo cheBolognese Lasagna chine bechamel & qu ...
Swiss wicker chingwa (chiGerman, zvichienderana nedhaimi: Zopf kana Züpfe - shallow) iri ...
Kuonekwa kwehunyanzvi mukicheni kune zviso zvakawanda uye pfungwa yeiyo Tiger & qu ...
Huku mu tini inogona
Iyi ndiyo nzira yekutanga yekubheka huku inonaka kunze. Inokodzera nzira se ...